Esihlokweni sethu esithi "Prostokvasha nesicelo sayo ekhaya" sizochaza ukuthi ungasisebenzisa kanjani i-yogurt. I-Serum iqukethe izakhi kanye nezinto eziphilayo ezidingekayo ukuze inyama yethu ifomu kalula kalula, futhi iphrotheni. Eminyakeni engu-25 abantu kancane kancane baqala ukulahlekelwa isisindo somzimba. Umzimba wakhe uba yi-flabby, futhi akukho ukuqeqeshwa kuzokusiza, uma impahla eyakhiwe eyinhloko - iphrotheni ayitholakali. Amaprotheni omuncu, ase-serum, athandwa kahle kakhulu, ngoba ekwakheni le phrotheni iseduze neprotheyini equkethwe egazini. Futhi ngaphandle kwalokhu, i-serum isalokhu icebile nge-vitamin B2, evuselela umzimba we-fat and carbohydrate, futhi ibuye ibe ne-magnesium, i-phosphorus, i-potassium ne-calcium.
Uma wena, naphezu kokuthi i-serum iyasiza, awufuni ukuyiphuza, ungayisebenzisa okungenani njengezitho zangaphandle. Futhi lokhu kuzoba okufanayo. I-Serum ijubisa inqubo yokuvuselelwa, ilulaza futhi ifinyelela isikhumba, iwuhlanze kahle. Uma ushisa ebhishi, zama ukufaka ibhulashi le-serum, engeza ebhodini, ekushiseni kwama-degrees angu-37, izingxenye ezimbili ze-serum futhi ulale amaminithi angu-10 ekugeza. Ukubomvu nobuhlungu, njengoba isandla sizosusa. Enye yezindaba ezinhle, i-serum ibekezelela kahle isikhumba esibucayi kakhulu, futhi lokhu kuhlolwe wena.
Ingilazi yamasondo, uma uyiphuza ekuseni ngesisu esingenalutho, iyokwehlisa isilonda se-orange. Lokhu kwenzeka ngoba ibhalansi yamanzi kasawoti ilawulwa ngenxa yokuqukethwe okuphezulu kwe-potassium. Ukusuka emzimbeni, uketshezi oludlulayo luqala ukukhushulwa, futhi ama-slags nezinyosi zihlanzwa nazo.
Thatha uhlamvu oluncane, namaconsi amahlanu amafutha wekoro, uhlanganise nengxenye yesigamu se-whey bese ufaka le ngxube ebhodini. Kuzojabulisa isikhumba sakho. Ku-serum ushukela, ubizwa ngokuthi i-lactose. Uma kuqhathaniswa namanye amashukela, i-lactose ayitholakali kahle, futhi kusukela lapha ithambela kancane emathunjini, ithuthukisa i-peristalsis kanye ne-suppresses ye-flora i-putrefactive.
Hlanganisa izipuni ezintathu ze-whey ne-cottage shizi. Sula isikhumba bese usebenzise isiski kuso ngendlala encane futhi emva kwemizuzu eyishumi, ugeze ngamanzi afudumele noma itiye elihlaza.
Sifaka isandla esivumelwaneni esivele sishisiwe, ngokufaka amaconsi ambalwa wamafutha wejojoba, futhi imizuzu emihlanu sizobamba izandla kulokhu kugeza. Ngendlela, le nqubo iqinisa futhi izipikili.
Isisipuni esinamasondo ngokuhlanganisa amaprotheni kwenza igobolondo evimbela ukulahlekelwa komswakama futhi ihlanza kahle isikhumba.
Amaski asekhaya athuthukisa ukubonakala kwesikhumba
Mask ebusweni ngobisi obomvu
Thatha izipuni ezimbili ze-yogurt. Gcwalisa ubuso babo, bese ushiya le maski imizuzu engu-15, ugeze ngamanzi apholile, esiwafaka ujusi kalamula. Isikhumba sithola umbala omnene.
Mask nge izaqathe ebusweni
Thatha izipuni ezimbili ze-krotiji ijusi, 2 wezipuni ubisi oluboshwe.
Sixuba ijusi leziqathe nge-yogurt. I-mask izosetshenziselwa i-swab yekotini, engasetshenziselwa imbali ye-lime, i-oregano noma i-chamomile, noma emanzini e-lavender noma emanzini ase-rose. I-mask izosetshenziselwa ebusweni imizuzu engu-10 noma engu-15. Sifaka emasikini ngamanzi abandayo. Le mask ubuyisela ukubukeka.
I-Kefir mask yezinwele ezivamile nezigqoke
Thatha ubisi obuningi obisi obomvu bese usebenza nonke ubude bezinwele. Sizosihlanza ikhanda bese sihlamba izinwele. Bese ubeka i-cap eshahleni ekhanda lakho, uthuthukise ikhanda lakho ngethawula elifudumele, ubambelele imizuzu eyishumi nanhlanu. Sizogeza izinwele ngamanzi afudumele.
Ukuhlanza ubuso ngobisi obunamakha
Ungakwazi ukuhlanza ubuso bakho ngokugeza okujwayelekile, ungasebenzisa ama-lotions okuphekwe, afaka phakathi i-yoghurt. Ukuhlanza isikhumba ngokwanele, i-cotton swab moisten ngobisi obomvu bese uphonsa ubuso bakho kahle.
Ukuhlanza isikhumba samaseli afile, ingxube, elungiselelwe ngesisekelo se-kefir, iyosebenza kahle. Chop oats, ukolweni noma irayisi croup. Ku isipuni sefulawa engeza ubisi obomisiwe bese uletha esimweni se-gruel. Sigubha esikhunjeni sentanyeni bese sibhekene nokunyakaza kwemisipha, khona-ke sizogeza ngamanzi afudumele.
Ngokusekelwe ubisi oluhlelekile, lungiselela ukhilimu ophuthumayo . Sizovuthwa i-yolk, engeza 100 ml we-yogurt. Bese wengeza ijusi lehafu lemon, ama-gramu angu-50 we-vodka bese uwaxuba kahle. Ukhilimu olunjalo luzohlanza ngokuphelele futhi luhlanza isikhumba.
Manje siyazi ukuthi ubisi oluketshezi kanye nesicelo salo ekhaya, kuyoba usizo esikhumbeni sakho. Ezithombeni ezidumile, i-yogurt ithandwa kakhulu, ngoba ifinyeleleke kakhulu futhi iphumelele.
Yini okufanele ngiyenze uma ngifisa iminwe yami
Ungathatha kanjani imali ngaphandle kwediphozi?
Indlela yokugeza isikhunta kusuka ezingutsheni
Ungasusa kanjani iphunga elimnandi lesandla sesibili?
Konke mayelana namathawula wephepha
Pilaf nenkukhu kule multivark
I-puff pastry ne-cottage shizi
Inkukhu Breast ku-Baknut-Breaded Breading
Kungani izitshalo zingafaki ngaphansi kweqhwa?
I-minimalism engacacile: iqoqo leBetty Barclay S / S 2016
Amathiphu aphezulu angama-4 wokugqoka ngendlela efanele abesifazane abangaphezu kuka-30
Ukuhleka kanye nomlingiswa womuntu
Ukwelashwa kwameva esweni
Uma ingane iphakamisa umkhuhlane omkhulu
Ubuso bekhemikhali bebukeka ekhaya, ukubuyekezwa
Imikhiqizo yokunakekela Lip
Kungani lezi zinambuzane ziluma futhi zingasusa kanjani ama-wasps
Ngabe iziphi izimo ezithinta ubugovu?